कांग्रेस गण्डकी अपडेट : ४०२ मत गन्दा कसले कति मत पाए ? - Media Dabali
'गो ब्याक चाइना'काे नारा लगाउँदै वीरगञ्जमा चिनियाँ राष्ट्रपतिकाे पुतला दहन
कांग्रेस प्रवक्तामा लेखक र खतिवडाबीच प्रतिस्पर्धा, को नेता कसको पक्षमा ?
कोरोना संक्रमित भई आइसोलेसनमा बसेका ओलीले बनाए महामारीलाई मजाक
कांग्रेस बैठक बस्नुअघि नै देउवा भेट्न किन बालुवाटार पुगे प्रचण्ड र माधव नेपाल ?
पुरुसोत्तम पौडेलले 'फूल भिरैमा...' बजारमा चर्चा
जाल्पा लघुवित्तले ५ करोड २२ लाख रुपैयाँ बराबरको आईपीओ जारी गर्दै, कहिले सम्म आवेदन दिन सकिछ ?
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया किन एमाले कार्यकर्ता बन्दैछन् ?
कांग्रेस गण्डकी अपडेट : ४०२ मत गन्दा कसले कति मत पाए ?
शनिवार, मंसिर १८ २०७८
काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश सभापतिमा तीव्र प्रतिस्पर्धा चलेको छ। प्रदेश अधिवेशनअन्तर्गत आज नेतृत्व चयनका लागि भएको मतदानपछि अहिले मतगणना चलिरहेको छ।
पछिल्लो अपडेट अनुसार हालसम्म ४०२ मत गणना भएको छ। मतदानमा कूल ११४६ मत खसेको थियो। प्रदेश सभापतिमा ४०२ मत गणना हुँदासम्म शुक्रराज शर्माले २०४ मत प्राप्त गरेका छन्। शर्मा रामचन्द्र पौडेलपक्षका उम्मेदवार हुन्।
उनका प्रतिस्पर्धी पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवापक्षका उम्मेदवार अर्जुनप्रसाद जोशी १९८ मत प्राप्त गरेका छन्।
गण्डकी कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको गृहप्रदेश हो। उनले यहाँ सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षसँगको प्रतिस्पर्धालाई उनले प्रतिष्ठाको लडाइँ मानेका छन्।
गण्डकी प्रदेशको मतगणना शनिबार राति आठ बजेदेखि मतगणना सुरु गरिएको थियो । मतगणनाका सबै प्रक्रिया पूरा गरेर प्रदेश सभापतिसहितका पदाधिकारीको मतगणना शुरु गरिएको कास्की कांग्रेसका निवर्तमान सभापति एवं निर्वाचन संयोजक कृष्ण केसीले जानकारी दिए ।
उनले निर्वाचन साँझ ५ बजे सकिएको भएपनि सवै प्रक्रिया पूरा गर्दा मतगणना गर्न ढिला भएको बताए ।
यस्तो छ यहाको प्यानल समुह
उपसभापति – नेत्र महत (म्याग्दी)
उपसभापति – मेखलाल श्रेष्ठ (स्याङ्जा)
महामन्त्री – ईश्वर पाण्डे (गोरखा)
महामन्त्री – कुमार खड्का (कास्की)
सहमहामन्त्री – झुलबहादुर राना (तनहुँ)
सहमहामन्त्री – ओमकला गौतम (नवलपुर)
सहमहामन्त्री – राजन पन्त (गोरखा)
सभापति शुक्रराज शर्मा
उपसभापति – कल्पना तिवारी (स्याङ्जा)
उपसभापति – हरिप्रसाद श्रेष्ठ (बागलुङ)
महामन्त्री – विष्णु लामिछाने (नवलपुर)
महामन्त्री– किरणबाबु श्रेष्ठ (गोरखा)
सहमहामन्त्री– रामचन्द्र जोशी
सहमहामन्त्री – रमेश पाण्डे
सहमहामन्त्री– कोपिला रानाभाट
सहमहामन्त्री– युवराज बस्ताकोटी
सहमहामन्त्री– गणेश सापकोटा